Qabsoon, Qabsa’aan fi Oganni qabsoo biyya galuu qabu.
Habashoon yaakka isaan 130 saba fi sabilamii biyya Ethiopia irratti dalaganin Ethiopian rakko kana irra ga’uu ishee amanu hin feedhan. Badii Hojjetan tokko ilee dogoggora hin jeedhan, sirina Nafxanya fi ogannota siirinicha lamii keenya fixan fknf Minilikin har’a ilee goota gootaa caaluu jeedhan dhadeesaa jiru, Hitilern dhadessa Isreal waliin dubachuu hin dandeesuu, diiga Oromoo dhangala’ee irratti qoosa Oromoo irratti dulaa wa’ee waliin jirachuu fi tokkumma Ethiopia dubachuun hin dandamuu. Amaaraa ani Oromoo dha malif jeete, Wa’ee Oromoo malif barreesite, wa’ee Minilik maa dhadeesuu didee uummataa jeedhudha. Oromoo gartuu akkas jeedhu waliin marii goochun goonkuma yaadamuu hin qabu.
Diigumasa Ethiopiaf ittigaafatamuma hunda Habashoota keessatti Amaaraatuu fudhachuu qabu, sababin isaa :
Eritrean nagaa fi jalalan qabu dhisaan diina goodhan lubu millona akka dhumuu kan ta’ee siirna Nafxanya habashan.
Oromoo lafa isaa irra fudhatan garba goodhachuu isaani irra iyuu uummataa walka ol ArbaGugu, Caalii Calanqoo fi Oromiyaa guutuu keessatti oromo fixaani kun akka gootumatti dhadatuu malee akka yaakkatti fudhatan dhiifma gaafachuuf qoophi waan hin qabneef habasha waliin waan dubatamu hin jiru,
Tiggroon Amaaaraa waliin aangoo wal fakataa qabatan ilee siirn Amaaraa hacucaa haama geggees jeechun Tirgoon bosona lixan Ethiopian lola hamaa irratti geggesun balaa geesisani jiru,
Siirn Amaaraa kun siirna jijjira fi diimokraasiitti hin amane siirna boodatti hafaa waan ta’eef waggota 100 ol beela fi gadaduman ummaatii millonooti dhumaan jira.
Qabxiilee kana oltti caqasame sababa isaanin Millioni biyya ba’aan, biyya bu’uu caalaa iyuu Oromoon kumatama heedun Ongee fi Galana Medirteraniya fi India keessatti dhumataa jiru, shamaran keenya biyya arabatti meesha ta’aan gurgurama jiru.
Oromoon Nannoo Finfinee, Diredawa fi Harari jiran seeran ala lafa isaa irra buqa’uu Benya malee samamuu irra darbee lafi isaan irratti Oromumma isaan yakkamee Federala jala akka bulan goodhamun yaakka.
Kanaaf fi kan kana fakkatan yaaka dalagalmee hunda fi Habashoon ittigaafatamumma fudhachuu qabu. Isaan garuu yaaka isaanf dhiifma gaafachuu mana amma iyuu siiri akka ta’aan dhadachuu irra darbani barana ammoo Oromummaa fi Oromoo irratti dulaa jiru. Gartun habasha haqa Oromoo hin fudhanee kun (EPRP, Moresh wagane (Gala Geday), TGC, Ginbot 7, USJD, Arbanyochi, TPDN, Jijjirama. Waan hunda dhiifnee waliin jirachuuf feedha nu argsiifne Habashoon akka dadhabinatti fudhatan.
Qabsoo wagga 40 geggefame harka Habasha jala galchuuf Oromoo Habasha jalatti gurmeesun yaaka yaakaan ol hojjechuu egalan. Fakeenyaf USJD (Dr. Negaso Gidada) fi ABO jijjiirama J/Kamal Galchu Oromoo habasha jala hirirsun yaaka yaakan oli dalaga jiru, kana irra dhabachuu qabu. Duran Nafxanya Tigire Oromoo irratti goobsani (angoo qabsisani) utuu wagga 20 hin guutin amoo Nafxnya Amaaraa hamma siirna Minilik wara deebsuuf deemu Oromoo irraa korsisuuf yaalun cubudha, yaakka gantuman yeroo 2 raawwatamee waan ta'eef dhiifama hin argatan.
Habashoon goocha sukanesa wagga 130 nu irratti raawatan utuu nu dhukubu goocha sukanessa isaani durii caaluu nu irratti raawachuuf qoophii egalan jiru. Weerara median nu irraati deemsisuu irra darban albee/biladhann DC Oromoo qaluuf ka’aan, nama Oromoof falmuu hunda Terorist jeedhan.
Yammuu diini akkas eegree Oromoo fi Oromiyya baleesuuf wal gurmeese ka’ee kanatti Oromoon ilee qabsoo isaa shafsisuuf yommi irra iyuu caalaa tokkumman ka’ee waraqsa wal irra hin cinee geggesuu qaba. Kanaafi ammoo biyya keessa fi biyyaa alan walgurmesuu qaba. Ogaani qabso diaspora ta’ee USA, Europa, Asmara ykn Kenya ta’ee qabsoo biyya keessa oganee galman ga’uu akka hin dandeenye mirikana’ee jira. Dhimma kana irratti GPOn wagga tokko ol qoorano adeemsisen mirkanese jira. Qabsoon uummata ishee keessa batee akka qurxumi bishani batee ni dutii jeechun jala muree ibsiine ture. Dirqami biyya alaatti email, Skype, FB, fi Message gara biyya ergamuu utuu bakka hin ga’iin diina harkatti akka kuuftu beekuu qabna. Diini ammoo ragga kana funanachuun namoota kana qabee nuuf hojjetan malee jeedhe deebsee akka tikka isaa goodhatee akka fayadamuu beekamee jira. Walumagalati diasporan qabsoo mallaqa, yaadan fi diplomasiin qabsoo yoo degeere malee qabsoo ala ta’ee biyya keessati oggana jeechun soba.
Uummatii biyya keessa jiru ilee hanga danda’ee wal ijaree qabsa’uu qaba ykn of qoophesuu qaba malee diaspora irra bilisumma egachuun of gowomsuu dha. Dargaggoon Oromoo ammale Aalaabaa Habasha batan yoo jiratan dogoggoran jiru, Aalaaban caarqidha garuu waan itti hin amanee baachutuu salphina. Kan abbaa biyyuma Oromoo barbanuu booleensi ta’ee baaleen biyya galee gucaa qabsoo qabsisudha. ABO qabsoo wagga tokkof biyya galchun Oromoo guutuu isaa wa’ee bilisumma gara busuu dandayee ture. Qabsoon biyya keessati deemuu qaba, Oromoon abbaa qabachuu qaba jeechun, Guca qabsoo bara 1997/2005 WFDOn biyya keessatti qabsisee feedhi uummataa keenya akka gaafa ABOn galee dhuga jiru ummani hubatee ture. Amayuu tanan Dhaabbileen Amaaraa 10 ol ta’aan Shabiyan deegeraman biyya seenuuf yaamu deeman kana Oromoon caalisee ta’uu hin qabu. Saboontoota Oromoo WFDO fi OBKO (OFC) fi OPDO keessa jira qabatee uummataa isaa hamatee yoo xinatee Oromiyya guuditi Ethiopia keessatti dhunfachuu qaba. Angoo biyya sun akka uummataa keenyan hirmachuu qabna. Kun kan ta’uu qabuu garuu walii galete TPLF qoofan utuu hin tanee walii galtee Biyootaa birran ilee deggeramee ta’uuu qaba. Dhaabileen Oromoo biyya jiran tokko ta’uu qabu.
Lakki Wayyanen hin amanamtuu qabsoo hidhanno qoofa barbana warii jeedhu ilee deggertoota fi miseensoota hortee Qabsoo remotcontrol utuu hin tanee qabsoo biyya keessa galchuun Bosona Oromiyaa keessatti egalamuu qaba, kana goochuuf ammoo Oganii qabsoo biyya keessatti geggesuu qaba, dargaggoota lolan lolchisuu danda’anin oganamuu qaba, ogannoon waggota dheera qabsoo geggesan muxaanoo argatani hojii diplomasii hojjechun qabsoo hidhanoo cimsuu qabu. Kana irra kan hafee qabsoo biyya ala ta’aan biyya keessatti geggesun akka bu’aa hin qabnee qoorannon mirkaneefanee jira.
Goorsi xumura irratti walti dhamanu yoo jirate waan sadii:-
Oromoon badii hojjenu irra of qusachuu qabna. Insi isaa tokko ijaruu diiguu, isaa hojjetu danquu ykn itti jibuu, isaa nama garggaruu komachuu, isaa waan tokko hin hojjene ta’ee nama qeequu ammoo dhadheesun siiri miti. Wal barsisuu iraa hiinaafaan nami hubannoo akka hin qabanee goochuu, akka wal argee hin mari’anee goochun yaakka. Hubannoo uummataa keesumatti hubannoo dargaggoon qabsoo Bilisumaaf qaban danqun hamilee qabsa’oota midhun seena birratti nu gaafachisa.
Amaala waaraaqaa fi jaalumaa qabachuu qabna. insi:- Orommuamaa, Jaalumma, Haqan hojjechuu, dhugaaf dhaabachuu, Bilisummaa Oromoo fi Abba Biyuuma Oromiyyaaf hanga dhumatti falmachuu qaban, kana goochuuf ammoo ilaalcha fara Qabsoo Bilisumaa irra of egachuu qabna, isaan ammoo Amanta leliisuu ykn dhadheesuu, Gandumaa jala adeemuu fi ganduman hojjechuu, Diina ykn Habasha jala adeemuu, sodachuu fi diinafi hojjechuu disuu qabna.
Sodachuu fi fayiida barbarduu qabsoo keenya irratti bala gudaa waan fidaa jiruuf kun atataman siirachuu qaba. “Oromoo abbaa biyya waan ta’eef onnatee falmachuu qaba malee sodatee mata busuu hin qabu. Sodan dhukuba Oromoon sodachuu hin qabu, Wayyanen fi sareen tokko, yoo sodatan baqatan nama birra hin hafutuu, Oromoo dhabadhuu wayyanee of irrati loli” 1997/2005, Oromoon biyya isaa argachuuf badee baleesuu qaba malee sodatee 10 ta’ee 1 baqachuu hin qabu. Oromoon abbaa qabeenyatti abbaa biyya tanee qabeenya hunda dhunfachuu qabsa’uu qabna malee fayyida xiinoof jeene qabsoo gurguru, lamii gurguru, qabsa’oota hamilee cabsuun Oromoo qabsoo geggesaa jiru irra kan egamuu miti, Fayida xiinoof qabsa’oota maqa xureesun qabsootti bishan naqun fara qabsooti waan ta’eef abaramuu qaba.
Oromoo kara essanuu haa qabsa’uu diina dhisaan Oromoo irratti boba’uun dhabachuu qaba. Garuu ammoo Qabsoon keenya feedhii fi gaafi Uummataa Oromoo hiree of ofiin murteefachuu fi Bilisumaan fi walabuman abbaa biyumaa isaa deefachuu kan falesuu ta’uu hin qabu. Kana irratti Dhaabbileen Oromoo haala duree tokko malee wali galuu qabu.
Oromiyyaan Ni Bilisoomtii!
Gummi Paarlamaa Oromoo fi
Gummi Dhaaloota Haaraa waraaqsaa Bilisummaa Oromoo